Gbasara Anyị - Shandong Buluoer Intelligent Technology Co., Ltd.
Ndlọ ọrụ ahụ jikọtara na Shandong Jubangyuan Machia Group.Specializes na CNC Plasma cut machine, CNC flab Cut machine, Laser ngwá ọrụ, akụrụngwa ịgbado ọkụ, sistemụ CNC na nyocha nke ọrụ na mmepe, n'ichepụta, ire ahịa. na service.The otu ụlọ ọrụ bụ ụlọ ọrụ na-arụ ọrụ dị elu nwere afọ 24 nke ahụmịhe nrụpụta ọrụ. Ọ nwere ọkachamara R&D otu ma nweta mba 25 ikike ikikere.
Companylọ ọrụ ahụ agafeela asambodo usoro njikwa njikwa IS09001. Dabere na ihe achọrọ maka usoro nchịkwa gburugburu ebe obibi IS014001, ọ na-achịkwa akụkụ niile nke akụrụngwa, nhazi, igwe na mbupu iji hụ na arụmọrụ na mma nke ngwaahịa.
Buluoer Intelligent nwere ahịa zuru ezu na mgbe erechara ahịa na ụlọ ọrụ ahụ, ma guzobe ngalaba ọrụ ụlọ ọrụ pụrụ iche iji nye nyocha usoro na mkpụmkpụ laser zuru oke, mpempe ọkụ ọkụ plasma, ngwa ngwa ịgbado ọkụ na-enweghị usoro na usoro na-abụghị nke ndị ahịa dị iche iche.
Shandong Buluoer Intelligent Technology Co., Ltd. nwere ọkachamara na akụrụngwa ịkpụ laser, akụrụngwa ịkpụ plasma, igwe pịakọ ọnụ igwe, igwe ịgbado ọkụ, sistemụ CNC na akụrụngwa arụmọrụ R&D, imewe, imepụta, ahịa na ọrụ .Ọ bụ onye isi akụ na ụba China CNC ọnwụ igwe. Ọ bụ ụlọ ọrụ "ọpụrụiche na ihe ọhụrụ" na Jinan.
Ngwaahịa nke ụlọ ọrụ ahụ nwere ikike ikike ọgụgụ isi nwere onwe ha, ọtụtụ ndị nwebisiinka teknụzụ na nwebisiinka sọftụwia. Ngwaahịa ahụ agafeela asambodo mma ISO 9001 ma ere ya nke ọma ma n'ụlọ yana mba ofesi. Ndị ọrụ ụlọ na ndị mba ọzọ na-eto ha maka ngwaahịa akụnụba ha na nke bara uru, arụmọrụ kwesịrị ekwesị ma nwee ntụkwasị obi. Companylọ ọrụ a ga - enye gị ọnụọgụ ọnụọgụ ọnụọgụ ọnụọgụ ọnụọgụ dabere na mmụọ nke omume na echiche ọhụụ na omume. Mepụta ihie ọnụ.
Igwe igwe plasma nke na-edobe nọmba tebụl
Gantry ire ọkụ plasma njikwa akara igwe
Ejikọtara CNC Cutting Machine maka Gantry Tube Plate
CNC Cutting Machine maka Gantry Slab
Anyị ga-agba mbọ inye aka nye gị ihe kachasị mma ị nwere.